Wasiirka Diinta DKMG ah “In Mowliidka hal meel lagu wada cuno ayaa wanaagsan hadii meelo kala gedisan lagu cuno Ajara badan ma yeelanayo”. | Halganka Online
Wasiirka Diinta DKMG ah “In Mowliidka hal meel lagu wada cuno ayaa wanaagsan hadii meelo kala gedisan lagu cuno Ajara badan ma yeelanayo”.
Dowlada KMG ah ee uu hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed ayaa isku bedeshay cilmaanimo iyo Qabuura Galnimo marka la eego qaabka ay u dhaqmayaan madaxda dowladaasi oo horay u sheegan jiray in ay yihiin wadaado Baraarugsan.
Wasiirka Awqaafta iyo arrimaha Diinta ugu magacaaban dowlada KMG Nuur Cali Aadan ayaa shir Jaraa’id uu ku qabtay degmada X/weyne magaalada Muqdisho ku sheegay in Dowladiisu ay dhigayso xaflad Mowliid ah oo Nabiga lagu xusayo!.
Ninka Dowlada arrimaha Diinta ugu magacaaban wuxuu Idaacadaha magaalada Muqdisho ka sheegay in madaxda ugu saraysa Dowlada KMG ah ay 30-ka Bishan ka qayb geli doonaan xus weyn oo uu sheegay in madaxtooyada Villa Somalia lagu qaban doono.
“Dowladdu Xus weyn ayay u qaban doontaa Mowliidka Nabiga Raysalwasaaraha ayaa naga maqan marka uu dalka ku soo laabto ayaan xus dhigaynaa” ayuu yiri Nuur Cali Aadan.
Wasiirkan Suufida ka tirsan wuxuu waajib ku sheegay xuska Bidcada ah oo ay dhigaan qabuura galeenka iyo kooxaha u ololeeya ka beensheegidda diinta alle,arrinta layaabka leh ah ayaa ah markii uu Wasiirku sheegay in Mowliidku yahay munaasabad wax lagu cuno.
“In Mowliidka hal meel lagu wada cuno ayaa wanaagsan hadii meelo kala gedisan lagu cuno Ajara badan malahan shacabka waa in ay meel kuwada cunaan” ayuu yiri Nuur Cali Aadan.
Qabuura Galeenka ku sugan qaybo ka mid ah Gobolka G/gaduud ayaa shalay dhigay munaasabado Bidco ah oo ay ku sheegeen in ay ku xusayeen Nabiga Muxamed CSW, shacabka ayaa mar hore ka reja dhigay in dowlada KMG ah ay shareecada qaadato waxaana maalinba maalinta xigta dowlada KMG ah laga maqlaa erayo u hiilinaya gaalada.
« Ciidamada Cadawga AMISOM oo Sedax qof oo Dhalinyara ah ku Toogtay Xaafadda Sigaale magaalada Muqdisho. Sheykh Abu Mansuur iyo Sheykh Xasan Turkri oo ka wada tirsan Shabaabul Mujaahidiin oo meel fagaara ah uga khudbadeeyay Shacabka magaalada Kismaayo. »